Muungaab:Sarkaalkii qariya askari dil ama kufsi gaystay isagaa loo dilaa
Home Somali News Muungaab:Sarkaalkii qariya askari dil ama kufsi gaystay isagaa loo dilaa
Gudoomiyaha Maxkamada Sare ee Ciidamada qalabka sida Xasan Maxamed Xuuseen “Muungaab” oo maanta saxaafada shir jaraa’id u qabtay ayaa sheegay in Saraakiil katirsan doowlada Soomaaliya ay u xiranyihiin sii deynta dad dilal iyo kufsi gaystay.
Muungaab, ayaa ku nuux nuuxsaday in Sarkiilkii qariya qof danbi gaystay isaga loo toogan doono.
“Sarkaalkii qariyaa askari fal dil ama Kufsi gaystay isagaa loo tooganayaa, yaan la qarinin, haloo soo gudbiyo sharciga, si loogu qaado xukunka uu leeyahay” ayuu yiri Muungaab.
Muungaab, oo ku dheeraaday kahadalka Kufsiga loo gaysto gabdhaha iyo hooyooyinka Soomaliyeed ayaa baaq dheer u jeediyay Ciidamada doowlada Soomaaliya, taasoo ku aadan in aysan dhibaateyn dadka Soomaaliyeed.
Muungaab ayaa tilmaamay in markii doowlada Soomaaliya ay la wareegtay gobolo farabadan ay cabasho badan soo muujiyeen dadkii dagana deegaanada lala wareegay, gaar ahaan Shabeelada Hoose, oo hooy unoqotay falalka xun xun ee Kufsiga.
“Milatari hubeysan haduu inta qori qaato uu gabar Soomaaliyeed xoog ku kufsada asigoo hub u adeegsanaya xukunkiisa shareecada Islaamka waa dil toogasho ah” sidaa waxaa yiri gudoomiyaha maxkamada Sare ee Ciidamada qalabka sida.
Muungaab, ayaa si gaar ah farta ugu fiiqay labada gobo lee shabeelooyinka, waxa uu tilmaamay in dadka ku dhaqan goboladaas ay horay dhib ugu qabeen Al-shabaab, sidaa darteedna aan loo dulqaadan doonin in markale ay Ciidamada doowlada dhib u geystaan dadkaas.
Hadalka gudoomiyaha Maxkamada Sare, ayaa kusoo aadaya xili maanta ay maxkamada Ciidamada qalabka sida dil toogasho ah ku xukuntay 3 qof oo dhamaantood kawada tirsan Ciidamada XDS iyadoo mid kamid ahaana uu ahaa sarkaal, sadexdaan askari ayaa lagu eedeeyay ineey horay udileen dad rayid ahaa oo aan waxbo galabsan.